“(83)-Yeroo [nafseen] kokkee geessu,maaliif hin deebifnee?(84)-Yeroo san isin kan ilaaltan taatanii osoo jirtanuu, (85)-Nuti isin caalaa gara isaatti dhiyoodha, garuu isin hin argitan. (86)- Kan hin qoratamnee fi hin mindeefamne yoo taatan nafsee san deebisaa. (87)-Yoo kan dhugaa dubbattan taatan maaliif hin deebifnee?” SuuratuAl-Waaqi’a 56:83-87
Yeroo namni tokko du’u yommuu nafseen bahuuf kokkee geessu, isin osoo ilaaltanii fi bira jirtanuu maaliif nafsee san qaama keessatti hin deebisnee? “Gooftaa Guyyaa Qiyaamaa isin kaasee isin qoratu fi jazaa isiniif kafalu yoo mormitan, nafsee tana maaliif hin deebisne? Yoo kan hin deebisne ta’e, dhimmi harka keessan osoo hin ta’in harka Rabbii akka jiru beekaa